Transmission Division Factory - China Transmission Division Abakhiqizi, abahlinzeki
IServo Conveyor Roller - HEGY-50
Nomaphi lapho impahla kufanele ihanjiswe, idluliswe, inqwabelene, iphakelwe noma iguqulwe, kusetshenziswa imikhiqizo ye-HYT yokuphathwa nokuthuthwa kwemithwalo yunithi.
Ama-Roller okuhambisa avela ku-HYT yimikhiqizo engakhethwa ukuthutha iziqukathi nama-pallet ezikhungweni zokusabalalisa izinsizakalo zeposi nezokuposa, izinkampani zoku-oda ngeposi, izikhumulo zezindiza nezindawo zokukhiqiza, kepha nakwezinye izimboni ezinjengezitolo ezinkulu kanye nomkhakha we-e-commerce.
I-HYT, njengomkhiqizi wokuqala eChina ukukhulisa ngokuzimela imigqomo kagesi enamandla ahlukile, inikeza imikhiqizo ehlukahlukene enemininingwane ehlukile ongayikhetha. Idizayini enelungelo lobunikazi ixazulula isimo sokuvuza kukawoyela ngenxa yokwanda komoya ngesikhathi sokushisa okuphezulu. Ngenkathi kuthuthukiswa ukuthambisa, kuqinisekisa ukushabalalisa kokushisa okufanayo, kukhulisa ukuthembeka komkhiqizo futhi kuthuthukise impilo yenkonzo.
IServo Conveyor Roller - HEGY-67